Pulper များအတွက်အစာကျွေးခြင်း Conveyor China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အစာကျွေးခြင်း Conveyor Pulper ပစ္စည်းကိရိယာများ,Conveyor ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအစာကျွေး,Paper Maill Feed Conveyor
Home > ထုတ်ကုန်များ > Pulper ပစ္စည်းကိရိယာများ > Pulper များအတွက်အစာကျွေးခြင်း Conveyor
အများအားဖြင့် Hydrapulper သို့မဟုတ် Mid Consistency Pulper သို့မဟုတ် High Consistency Pulper နှင့်ချိတ်ဆက်သည်။ Feeding Conveyor သည် Chain Conveyor ဟုခေါ်သည်၊ စက္ကူစက်ရုံသည်ကွင်းဆက်၏စဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်ရွေ့လှုပ်ရှားမှုကို အသုံးပြု၍ အမျိုးမျိုးသောအလေးချိန်ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်ရန်နှင့်အမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ ပုံးအမျိုးမျိုး၊ နှင့်အနည်းငယ်အလေးချိန်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းများအခြားတစ်ခုတည်းအပိုင်းပိုင်း။ စက္ကူလုပ်ငန်းတွင်၎င်းကိုဖြန့်ကျက်သည့်သို့မဟုတ်စုပ်ယူထားသောစက္ကူပျော့ဖတ်နှင့်စွန့်ပစ်စက္ကူပြားများကဲ့သို့သောပစ္စည်းများသယ်ဆောင်ရန်အဓိကအသုံးပြုသည်။
၃။ Idler traction ကွင်းဆက်နှင့် Hollow roller ရိုးတန်းနှစ်ခု၊ ရေနံ pin pin မှ ၀ တ်ရိုးလက်အထိဝတ်ဆင်နိုင်သည်။
ကွင်းဆက်ကြိုးနှစ်ချောင်းသည်ကွင်းဆက်ပြေးခြင်းကိုသွေဖည်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ရှည်လျားသော ၀ င်ရိုးကိုချမှတ်သည်။
5.Cain chain ဘီးသည်သံမဏိကို အသုံးပြု၍ wear-resistance ကိုတိုးတက်စေသည်။
ကုန်ကြမ်းစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် ၆.Raw ပစ္စည်းထည့်သွင်းထားသောပန်းကန်သည် V ဒီဇိုင်း (ထိရောက်သောသယ်ဆောင်မှုအကျယ် ၄၀၀ မီလီမီတာထက်ပိုသော) ကိုအသုံးပြုသည်
7. Orbit အမျိုးအစားသည်ပုံမှန်လည်ပတ်နေပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်နိုင်ပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်။
အကယ်၍ သင်သည် Pulper ပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ် Pulping Equipment ၏အပိုပစ္စည်းများရှာဖွေနေပါက pls ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ကြိုတင်အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှု:
၄။ အခါအားလျော်စွာအဆင့်မြင့်အရည်အချင်းပြည့် ၀ သော ၀ န်ဆောင်မှုပညာရှင်ကိုသင်တန်းပေးခြင်း
1. လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အရည်အသွေးသည်ပထမနေရာတွင်ရှိသည်။
2. လျင်မြန်စွာ & ဘေးကင်းလုံခြုံပေးပို့။
ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်းအော်ပရေတာကို site ပေါ်တွင်သင်တန်းပေးခြင်း။
ကောင်းမွန်သောဘဝတာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
၈။ နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့နှင့်နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
စက္ကူစက်မှုလုပ်ငန်း Chain ပေါ်ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစာကျွေးခြင်း Conveyor Pulper ပစ္စည်းကိရိယာများ Conveyor ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအစာကျွေး Paper Maill Feed Conveyor စာနယ်ဇင်းပစ္စည်းကိရိယာများ filter Pulper ပစ္စည်းကိရိယာများ Autoguide စက္ကူ Pulping ပစ္စည်းကိရိယာများ စွန့်ပစ်စက္ကူ Pulping ပစ္စည်းကိရိယာများ အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်အထူပစ္စည်းကိရိယာများ